ဇူလိုင်လ 2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇူလိုင်လ
Cinegy: ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဗားရှင်း 10 အဆင့်မြှင့်မှုများ @IBC2015
Cinegy ရပ်တည်ချက် 10.A7 နှင့် 30.A7 @IBC41 မှာယင်း၏ပြည့်စုံထုတ်ကုန်လိုင်းပေါ်ဗားရှင်း 2015 ပြလိမ့်မည်! IBC မှာဧည့်သည်ပထမဦးဆုံးလက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်ဤကြံ့ခိုင်ဗားရှင်းအဆင့်မြှင့် 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions, တိမ်တိုက် Multi-Channel ကိုပလေးအောက် Solutions, လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်မော်ကွန်းတိုက် Solutions, IP ကိုအခြေပြုအသံလွှင့် Solutions နှင့်သတင်းများအပေါ်, စတူဒီယို & Live မူကြောင်းကို features အသစ်တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ..
12Stone ဘုရားကျောင်းရွေးချယ်မှုအတွက်-တစ်ဦးကနယူးအဝေးမှကျောင်းခွဲမှာအသုံးပြုမှုများအတွက် HVS-100 အိတ်ဆောင်ဗီဒီယို Switcher
FOR-တစ်ဦးရဲ့ Switcher ကိုးကှယျမှုရဲ့လေးဝေးလံခေါင်သီကျောင်းခွဲထင်းရူးပင်,, CA ၏အိမျတျောအသီးအသီးအဘို့တည်စိတ်ကြိုက်စနစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ - ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းသို့ရောက်ရှိရန်နှင့် 30,000 အသင်းသားတွေကိုကျော်၎င်း၏လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာပရိသတ်တို့အားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုးကှယျမှုပေးနေတဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဂျော်ဂျီယာ-based 12Stone Church®နင်္ဂနွေနေ့နံနက်အပေါ်ဝတ်ပြုရာအိမ်များသို့ငါးခုဧရိယာကျောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲငှါရှာကြံလေ၏။ တဦးတည်း ...
ရပ်ရွာသတင်းစာ Holdings က, Inc (CNHI) တည်နေရာ: ပိုဂရင်းဗိုင်း TX အမေရိကန်လျှောက်ထားဒေသခံသတင်းနှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်ဖြစ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအစီရင်ခံ, အရေးအသား, ဒီဇိုင်းနှင့်တည်းဖြတ်ကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြရမယ်, အပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု ... >>
အမေရိကန်ပစိဖိတ်ရေယာဉ်စု, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တည်နေရာအတွက်တပ်မှူး: WA အမေရိကန်အခြားသူများကိုဗီဒီယိုတင်ပြချက်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ၏ထုတ်လုပ်မှု။ ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ကွန်ပျူတာအခြေပြုတင်ပြချက်များအချိန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်အဖြစ် ... ။ more >>
ထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာ, နိုင်ငံတကာ - အရေးပေါ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု
American Heart Association တည်နေရာ: Dallas မြို့ကတက္ကဆပ်အမေရိကန်အမေရိကန်နှလုံးရောဂါ (အေ့ဟေ) တစ်ထုတ်လုပ်မှု Editor ကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပေါ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု (ECC) အုပ်စုတစ်စုအတွင်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ... ။ more >>
Lockheed Martin ကုမ္ပဏီတည်နေရာ: တင်ပြချက်များကိုဖန်တီးရန်အသံ, ဗီဒီယို, ဂရပ်ဖစ်များနှင့်စာသား data တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ Springfield VA သို့အမေရိကန်နိုင်ခြင်း။ အရေးအသားနှင့်တည်းဖြတ်, နည်းပညာ, သင်ကြားပို့ချသို့မဟုတ် command ကိုမီဒီယာ, သို့မဟုတ် ... နောက်ထပ် >>
Cognella, Inc တည်နေရာ: San Diego မှ, CA အမေရိကန် Project မှအယ်ဒီတာ - Cognella ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေရေး Imprint လုပ်။ * ်ထမ်းခေါ်ယူမှုဒီအလုပ် post ကိုဆက်သွယ်ပါကြဘူးပါ။ * ။ သင့်ရဲ့တာဝန်ပေးရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများအယ်ဒီတာများမှအတူမိတ်ဖက် ... နောက်ထပ် >>
ဘုရားကျောင်းစက်ရုံကိုးကွယ်မှု / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်
တထောင်တောင်ဘုရားကျောင်းတည်နေရာ: Concord NC အမေရိကန်ဗီဒီယို (စသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်, တည်းဖြတ်,) ။ ပါဝင်ပတ်သက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်ကိုကိုးကှယျမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းဖွံ့ဖြိုးကူညီရမြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ် ... ။ more >>